Published May 5, 2020 at 8:16 PM CDT
Joornaalka Magaalada Sioux City Journal wuxuu soo weriyey in afar qof oo dhintey ay ka shaqeyn jireen xiridda dhirta ee aagga.
Saraakiisha caafimaadka ma aysan siinin macluumaad ku saabsan geerida ugu dambeysay ee Gobolka Dakota.
Xarunta Islaamiga ah ee Siouxland ayaa sheegtay in Husseinain Jair oo 56 jir ah uu ka soo shaqeeyey Seaboard Triumph uuna ku dhintay jimcihii. Wuxuu ka soo jeedaa dalka bariga Afrika ee Ereteriya wuxuuna xanuunsanayay muddo toddobaad ah.
Wuxuu guriga joogay 4-5 maalmood wuxuuna ku qaatay labadii maalmood ee ugu dambeysay noloshiisa MercyOne ee Sioux City.
Shirkadda 'Seaboard Triumph' ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay inay shirkaddu ka xun tahay inay wax ka ogaato geerida shaqaalaha. Shirkadda waxay sheegtey inay la shaqeyneyso Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Dakota si loo xaqiijiyo sababta dhimashada loona uruuriyo faahfaahin gaar ah oo xaaladda ah.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa sheegtay in ku dhawaad ​​1,400 oo shaqaale ah oo ka howlgala saddex dhirta digaagga hilibka doofaarka ee Tyson ee ku taal Iowa ay tijaabiyeen cudurka 'coronavirus'.
Faafidda ugu weyn waa warshad Tyson oo ku taal Perry bartamaha Iowa. Dhirta kale waxay ku yaalliin Waterloo iyo Columbus Junction.
Dhanka kale, saraakiisha caafimaadka maxalliga ahi ma dhahayaan imisa qof ayaa saameyn ku leh xirmada dhirta ee Sioux City ama Dakota City. Toddobaadkii hore, ilo wareedyadu waxay u sheegeen hay'adaha wararka maxalliga ah in ku dhow 700 oo qof oo laga helay tijaabada cudurka warshad Tyson ee ku taal Dakota City.
Xarunta waxaa la filayay in ay dib u furato Talaadada kadib markii ay xireyso afar maalmood nadaafad qoto dheer iyo sii wadida tijaabada shaqaalaha. Shirkadda ayaa sheegtay inay dib u dhigeyso dib u furista.
Garyaqaanka Guud ee Iowa Tom Miller wuxuu ku soo biirey qareenada guud 10 dowladood oo kale si uu ugu booriyo Waaxda Cadaaladda Mareykanka inay dabagal ku sameyso baaritaan federaal ah oo ku saabsan tuhunka ku saabsan qiimaynta tuugada hilibka dadka ka ganacsada xoolaha.
Waxay ka walaacsan yihiin in kuwa wax weerara ay u adeegsadeen suuqa si lo'da looga shaqeeyo. Afarta shirkadood ee hilibka lagu xareeyo hilibka ayaa gacanta ku haya in ka badan 80% howlaha hilibka lo'da ee dalka.
Qiimaha shelf aad ayuu u sarreeyaa, si kastaba ha noqotee, qiimaha lo'du way hooseeyaan oo way sii socdaan ilaa ay ka soo jeedaan.
Local NewsLocalIowaSioux CityWoodbury CountyNebraskaSouth DakotanewsDakota CountySeaboard Triumph FoodsCOVID-19SomaliTyson Fresh Meats
Iowa ayaa soo weriyey maalinta ugu dhimashada badan sababtuna tahay COVID-19 iyadoo ay jiraan tobaneeyo dhimasho ah wadarta guud ee ku dhawaad 150.Waaxda…
Laba maalmood oo isku xigta, tirada dhimashada ee Iowa sabab u ah COVID-19 ayaa sii kordhaya. Shir jaraa’id subaxnimadii Khamiista, ayuu Guddoomiyaha…
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay tiro badan oo ah 740 kiis oo cusub iyo 8 dhimasho ah wadarta guud ee 170 dhimasho iyo ku dhawaad 7,900 xaaladood oo togan…
Warshada hilibka lo'da ee Tyson ee ku taal Dakota City ma furi doono sida la filayo Talaadada.Afayeen u diray Siouxland Public Media News qoraal galabtaan…